Heshiiskii Nairobi Maanta Ka dhuuntay Inuu Saxiixo Laftageen oo Draft Ah
26 March, 2019 in Wararka by Baidoanews Webmaster
HESHIIS - IS AFGARAD
Urur Goboleedka IGAD ayaa suura geliyay shir muhiim ah oo ay isugu yimaadeen Madaxweynaha KGS Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed iyo Golaha Isbeddel-doonka KGS. Kulankaas ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Nairobi 24kii Maarso 2019ka. Kulankaan ayaa u jeeddadiisu ahaa wada xaajood labada dhinac ah.
Madaxweynaha KGS wuxuu warbixin ka bixiyay xaaladda guud ee maamulka iyo caqabadaha ka jira deegaanka sidoo kalena waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo aayaha shucuubta KGS. Golaha isbeddel-doonka ayaa warbixin guud ka bixiyay sida ay uga go’an tahay in la heshiiyo si loogu adeego bulshada. Sidoo kale Urur Goboleedka IGAD ayaa iyagana soo dhoweeyay kulankaan, iyagoo ballan-qaaday inay kala shaqayn doonaan maamulka iyo isbahaysiga sidii loo heli lahaa dib u heshiisiin dhab ah oo isu soo dhoweyneyso shacabka KGS.
Intaa ka dib ayaa waxaa laysku afgartay qodobada hoose:
1.Iyadoo lala kaashanayo cid walba oo khuseysa, in si wadajir ah looga shaqeeyo sidii Sheekh Mukhtar Robow si dhaqso ah uu dib ugu heli lahaa xoriyadiisa.
2.In sida ugu dhaqsiyaha badan Maamulka KGS oo suura geliyo sidii magdhow loo siin lahaa dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay shaqaaqooyinkii waqtigii doorashada ee December 2018.
3.In la balaariyo, si dhab ahna loo dhameystiro dib u heshiisiinta uu Madaxweynaha KGS ka bilaabay magaalada Baydhabo.
4.Labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in ay sameeyaan hab lagu xalinaayo khilaaf walbo oo soo kordha, ayadoo aan laga tageenin cadaaladda iyo danta shacabka KGS.
5.In si wadajir ah laysaga kaashado sidii loo heli lahaa maamul wanaagsan, amni iyo horumar, loogana hortagi lahaa abaaraha iyo biyo la’aanta soo noqnoqta isla markaana xal waara loogu heli lahaa barakacayaasha.
6.Labada dhinac waxa ay garwaaqsadeen doorka odayaasha dhaqanka iyo culimaw-diinka ay ku leeyihiin ka hortaga maareynta khilaafaadka, nabadeenta iyo dib u heshiisiinta sidoo kale waxa ay ugu baaqeen in ay si firfircoon uga qeyb qaataan isku xernaanshaha iyo isdhexgalka shacabka KGS.
7.In bulshada KGS ay si wadajir ah gacmaha isu qabsadaan kana wada shaqeeyaan xal u helida dhibaatooyinka baahsan ee ka jira KGS.
8.Labada dhinac waxa ay sidoo kale ugu baaqeen qurbajoogta ka soo jeeda KGS in ay gacan ka geystaan nabadeenta iyo dib u heshiisiinta shacabka KGS.
9.In beesha caalamka gacan buuxda ka geysato dhameystirka dib u heshiisiinta, nabadaynta iyo in sidii deeq horumarined loogu fidin lahaa bulsha weynta KGS si koboc dhaqaalae u heli lahaayeen shcabka.
10. Labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in ay ka go’an tahay dhaqan galinta heshiiska la gaaray.
Gebagabdaii waxaa mahad gaar ah loo soo jeediyey Urur Goboleedka IGAD oo kaalin firfircoon ka qaatay xal u helida dhibaatooyinka taagan suurtana geliyey kulankan.
Mudane Cabdicasiis Xasan (Laftagareen)Xuseen Xasan Cabdi
Dowlada Gobedeelka KGS Golaha Isbedeldoonka KGS
HE. Dr. Mohamed Ali Guyo
Argayga Gaarka ah IGAD ee Soomaaliya